Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို,သာလွန်အရည်အသွေးအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း,အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများဒီဇိုင်း Die
မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာများတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်အဖြစ်, စိတျအပိုငျး 0,001 လက်မအတိုင်းတင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းအတွက် ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးဖြစ်လာရသည်။ အဆုံးအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. ဤပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များအများအပြားကြမ်းတမ်းအောက်-The-ပါးပျဉ်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆီးတားရပေမည်။ မှိုခြေစွပ်များနှင့်အခေါင်းပေါက်ပေါ်အရည်အသွေးနှင့်အဆုံးရလဒ်အသုံးအနှုန်းများအတွက် output ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ထုတ်လုပ်အဆိုပါ EDM အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကို client ကိုရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုနီးပါးသုညသည်းခံစိတ်ထူးချွန်ရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြ။